Dowladda Soomaaliya oo u digtay musharraxiin ku sugan Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Aarimaha Gudaha Soomaaliya, ayaa u digtay qaar ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Mudug iyo Galgaduud iney faragelinta ka daayaan arrimaha shirka maamulka loogu sameynayo labadaas gobol.
Lama xusin magacayada musharraxiinta loo digay hase ahaatee waxaa la qiyaasayaa inuu ka mid ah Jen. Cabdi Qeybdiid oo warbaahinta u sheegay in dowladdu lacag ku bixineyso iney soo baxaan musharraxiin ay wadato.
Akhri: War-saxaafadeedka wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Taariikh: April 29, 2015
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalku, waxaa maantay oo ay taariikhdu tahay 29/04/2015, ay soo saartay Warsaxaafadeed, ku saabsan arrin ka soo yeertay qaar ka mid ah saxiixayaasha Shirka Maamul u Sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud uuna ku eedeeyey in Dowladda Federaalku faragelin ku heyso shirka isla markaasna uu ku dhaliilay in Guddiga Farsamada Maamul U Sameynta Gobollada Dhexe ay ku guul dareysteen shaqadii loo igmaday.
Hadab waxaa halkaan Wasaaradda Arimaha Guduhu ku cadeynaysaa in aysan Dowladda Fedelaalku marnaba faragelin ku hayn Shirka Gobollada Dhexe, doorkeeduna uu yahay oo kaliya fududeynta qabsoomida Shirkaas iyo weliba sidii uu ku guuleysan lahaa.
Sidoo kale Wasaaraddu waxey cadeynaysaa in Guddiga Farsamada Maamul u Sameynta Gobolada Mudug iyo Galgaduud uu yahay mid u madax banana, awood buuxdana u leh inuu go’aan ka gaaro mas’uuliyadda loo idmaday, isla markaana u tababaran inuu guto waajibaadka loo xil saaray.
Ugu dambeyn, Wasaaraddu waxey uga digaysaa farageinta qaar musharixiinta ka mid ah ay ka hayaan shaqada Gudiga Farsamad, ayna ixtiraamaan habsami u socodka shirka, taasoo ah tan kaliya ee shirku ku najixi karo.
Agaasimiaha Xiriirka ee Wasaaradda Arimaha Gudah
Cabdifatah Cali Xasan.
Shalay ayay aheyd markii saxiixayaashii maamul u sameynya Mudug iyo Galgaduud oo kala ahaa: Galmudug, Ximan iyo Xeeb iyo Ahlusunna oo ay la joogeen odayaal ay ku dhawaaqeen in la kala diray guddiga farsama maamul sameyn oo ay dowladda Soomaaliya magacaawaday.
Dhinacyadaas ayaa ku andacooday in guddiga dowladdu soo magacaawaday ay u adeegayaan dano gaar ah, sidaas darteedna ay meesha ka saaren, dhisini doonaan guddi kale.